Home Wararka 20-Musharax ka badan oo isku soo taagay Doorashada Guddoonka Gollaha shacabka
20-Musharax ka badan oo isku soo taagay Doorashada Guddoonka Gollaha shacabka
Guddiyada qaban qaabada doorashada guddoonka labada aqal ee Baarlamaanbka federaalka Soomaaliya ayaa diiwaangeliyay sidoo kale siiyay shahaadada musharaxnimo musharaxiin badan oo u taagan guddoonka labada aqal ee Baarlamaanka federaalka.
Doorashada guddoomiyaha gollaha shacabka iyo labadiisa kuxigeen ayaa waxaa isku diiwaan geliyay 20-musharax, kuwaa oo tartan adag u geli doono hanashada saddexda kursi ee guddoonka gollaha ah.
Musharaxiinta ugu badan ayaa isku soo taagay xilka guddoomiyaha gollaha shacabka, waxaana kursigaasi loo diiwaangeliyay ilaa 8-musharax halka kuxigeenka 1-aad ku tartamayaan 7-musharax, waxaa sidoo kale kuxigeenka 2-aad u taagan 6 musharax.
Doorashada guddoonka gollaha shacabka ayaana la filayaa in ay adkaato, waxaana ku loolami doona musharaxiin ay kala wataan Villa Soomaaliya iyo qaar kamid ah musharaxiinta Mucaaradka .
Loolanka ugu adag ee doorashada Madaxweynaha Soomaaliya ayaana lagu ogaan doonaa cida ay u badan doonto natiijada kasoo baxda doorashada guddoonka labada aqal ee lagu wado in isbuucan ka dhacdo Muqdisho.
Akhriso magacyada Musharaxiinta isku diiwaangelisay guddoonka gollaha shacabka
Guddoomiyaha Gollaha Shacabka
1.Aadan Aadan Maxamad Nur (Madoobe)
2.Cabdulahi Adan Ahmed( Black)
3.Maxamad Mursal Sh.Cabdiraxmaan
4.Sadiiq Cabdi Nuur
5.Aadan Maxamad Saransoor
6.Shariif Maxamad Cabdalla
7.Cabdirashiid Maxamad Xidig
8.Xasan Cabdi Nuur
1.Maxamad Cumar Caana nuug
2.Maxamad Cumar Ceymoy
3.Sacdiya Haji Yasin Sacdiya Firimbi
4.Maxamad nur Abubakar Shariif Mustafa
5.Maxamad Cabdiqadir Jeego
6.C.raxman C.qadir Cade
7.C.karin Cabdow Xeydar
1.Cabdulaahi Cumar Abshirow
2.Mahad Cabdalla Cawad
3.Maxamad Xuseen Abukar
4.Asad Abdirizak Maxamad
5.Axmad Aadan Axmad
6.Saciid Maxamad Cali
Previous articleXildhibaan Sareedo oo markale dib loogu soo celiyay kursigeedii
Next articleSomali Government, US Company Dispute Legality of Oil Deal
Dr. Aweys Shiekh Ahmed oo ka hadlay daraasad lagu qiimeeynayo nooca...
Shariif Xasan oo noqday shaqsiga labaad ee ugu saamiga badan Salama...